Indlela eyiyo ukufumana acquainted kunye kubekho inkqubela. Psychologist ke ingcebiso
Abantu abaninzi bakhetha get acquainted nabo girls esabelana baya kuba ixesha elide ukucutha iimeko: kwi-institute, emsebenzini okanye, umzekelo, kunye abo bahlala engingqini. Olu khetho, kunjalo, unelungelo zikho, kodwa kaninzi carries ethile ingxaki: ishishini romances ingaba eyona nefuthe a career, kwaye umhlobo ke girlfriend ayinguwo namanani khetho kuba building olomeleleyo budlelwane nabanye. Ke ngoko, kuya kuba kuluncedo kuba guys ukufumana phandle njani ukufumana acquainted nge kubekho inkqubela kwi street. Psychologists kuthi ukuba kukho akukho enjalo iindawo apho ingaba kuba indecent ukwenza entsha acquaintances. Yesibini isiqingatha unako linda kuyo yonke indawo, kuquka kwi street. Nayiphi na acquaintance kuquka iziqalelo ze umdlalo, ngoko ke kuya kufuneka ukuba kwenzeka ngokunxulumene imigaqo ethile. Abaninzi kulutsha andazi njani ukuqala get acquainted kunye kubekho inkqubela. Uphawu lokuqala ukuba unxibelelwano kunye a stranger kwi street unako kuthweswa isithsaba kunye impumelelo yeyona uqhagamshelane ‘ngasonye’, kwaye kanjalo benevolent kwaye affable intetho. Oku kuthetha ukuba kubekho inkqubela liked the guy, kwaye yena watsalela ingqalelo kuye. Kodwa abantu abaninzi ngalo mzuzu balahlekile nje okokuba ngumthetho, gnat ngokwayo kuba indecision. Ukuba unobuhle enjalo ithuba ngu stupid, bamele ngokuqinisekileyo thatha ithuba. Ukuba guy thinks malunga apho ukufumana acquainted nge-girls, ngoko ke kufuneka nje kuba ukuba ushiye indlu. Acquaintance kwi street ngu ngexesha elinye a kunzima kwaye ethembisa ushishino, ngenxa girls ingafunyanwa apha absolutely ezahluka-hlukileyo. I-ubunzima ezinjalo unxibelelwano lies kwi-eyokuba kuyimfuneko ukuba umthetho ngokukhawuleza kwaye confidently ngaphandle disappointing a beautiful stranger. Kungenjalo, yena uya ngokulula kujikela kude kwaye kuqhubeka yakhe uhambo. Xa intlanganiso a kubekho inkqubela hayi kuphela appreciates ukuziphatha, kodwa kanjalo inkangeleko the guy. Ngumsebenzi lowo characterizes kuye kwindawo yokuqala. Kubalulekile ukujonga hayi kuphela stylishly, kodwa kanjalo babecocekile kwaye kulungile-groomed. Padded iingubo kwaye imdaka izihlangu ingaba engathndwayo ukubangela admiring glances ka-ekhethiweyo omnye. Ukuba guy akusebenzi sazi njani ukufumana acquainted kunye kubekho inkqubela, lowo kufuneka ukusebenza ngomhla wokuqala ibinzana. Kubalulekile akukho ezincinane ukubaluleka, ukususela lokuqala amazwi iya kuba ekuqaleni unxibelelwano.
Kwi street, girls rhoqo ucinge into yabo obubobakhe, abafazi, ngoko ke, bangabi nako ngoko nangoko siphendule isibheno kubo. Phambi nayo a stranger, kucetyiswa ukuba umnxeba yakhe ncuma nokuseka iliso uqhagamshelane. Wokuqala ibinzana kufuneka njengoko kakuhle kangangoko kunokwenzeka kwaye ukuthobela eziliqela imigaqo: Ukuba guy ufuna ukuqonda njani funda ukuya kuhlangana girls, kufuneka bafunde eyona nto: ukuba trust kwenu, ngalo a subconscious umphakamo, interlocutor kufuneka bafumane iimpendulo imibuzo elandelayo: Ukuba kubekho inkqubela ingaba uqinisekile ukuba unxibelelwano ayisayi kuzisa yakhe iingxaki, yena ngokuqinisekileyo uza kuba anomdla a aph kwaye witty guy. Uyakwazi zibalisa malunga kwindawo zokufunda okanye umsebenzi, ngoko ke ukuba interlocutor bafunda malunga nawe kancinci kakhulu. Akuvumelekanga ngoko ke kubalulekile apho ukufumana acquainted, naliphi na ityala kuyimfuneko ukwenza ngoko ke ukuba isizathu inzala waba kakhulu gca. Ukuba eyona imbono – elide unxibelelwano, musa kufuneka ucele kubekho inkqubela kuba cigarette okanye cela into, ixesha yinto. Namanani – xa kubekho inkqubela ekuqaleni kakuhle-zilahliwe kwaye reacts kakuhle jokes. Oku kuthetha ukuba yena liked umntu, kwaye yena happily communicated naye. Kodwa ukuze bonwabele oku impumelelo, kufuneka sazi njani kakuhle get ukwazi kubekho inkqubela kwaye constantly sebenza ngokwakho. Rhoqo, guys balahleke kwi imeko apho kubekho inkqubela ixhasa unxibelelwano, kodwa kukho ingaba akukho imiqondiso ebonakalayo – ezivelayo sympathy. Ukuba a stranger akusebenzi bonisa utshintsho lwendawo ngokwenqanawaname, kufuneka uzame ukuba inzala yakhe. Ukuva uqinisekile, kufuneka andazi kuphela njani ukufumana ukwazi kubekho inkqubela ngokuchanekileyo, kodwa kanjalo ntoni ukwenza kwimeko ukungaphumeleli. Ukuba kusekho akukho nesiphumo, kwaye kubekho inkqubela uqhubekeka zithungelana ‘kwi-umatshini’, kungcono ukuba end incoko, referring ukuba imisebenzi okanye urgent mba, kwaye ucele stranger kuba inombolo yefowuni. Endaweni yoko, akufanele umbuzo, kodwa i-assertion. Umfana umntu abe iqaphele ukuba wayeza happily kuqhubeka yakhe acquaintance phezu indebe ikofu. Mhlawumbi elandelayo xesha kubekho inkqubela iya kuba ngcono isimo, kwaye yena uya kuphendula boy reciprocated. Ngoku kulutsha ukuchitha ezininzi ixesha kwi-Intanethi kwaye ezahlukeneyo loluntu networks. Onikiweyo oku kunjalo, guys akufunekanga xana ukuba kukho, kakhulu, ungafumana acquainted ne-girls. Kodwa ukuba ulutsha abantu bacinga ukuba ngokwaneleyo ukuthumela lo myalezo, kwaye kubekho inkqubela ngokukhawuleza uqhubekeka zithungelana, ngoko bamele kakhulu mistaken. I-technique yokufumana acquainted kunye ‘VC’ iselwa enobunzima, kuba ufuna ukutsala ingqalelo kwaye beme ngaphandle ukusuka amakhulu kwezinye ii-akhawunti.
Ekubeni elungileyo photo ibalulekile
Hayi wonke kubekho inkqubela uza ufuna impendulo ukuba yena akanalo i-unye malunga ngumnini-akhawunti. Musa ukubeka kwi-i-avatar nemifanekiso ka-bhanyabhanya amaqhawe omzabalazo, inscriptions okanye iifoto ezilwanyana, le ndlela yokusebenza iza hayi kuzisa impumelelo. I kubekho inkqubela akusebenzi izwi, akunjalo bazive i-aura, ngoko ke lokuqala impression yena uya kwenza yi-umfanekiso. Icandelo ‘Malunga mna’ kufuneka kuzaliswa kwi-ngobunono kwaye inikisa umdla kakhulu, boring imigca ayisayi ukutsala ingqalelo. Uyakwazi khankanya oqaqambileyo moments ukuba yenzekile ebomini, zichaza imisetyenzana yokuzonwabisa kwaye imisetyenzana yokuzonwabisa. Ungalibali malunga uluvo humor, kodwa kakhulu kakhulu ukuya kakhulu ukuza kuthi ga ngoku, hayi impress i-buffoon. Ukuba iphepha lemibuzo malunga ngu compiled kwaye umfanekiso ikhethwe, ngoko ke uyakwazi ukufumana phantsi ishishini. Okokuqala, kuyimfuneko ukuba ukhethe iphepha le kubekho inkqubela abo baya kuba ‘victim’. Wokuqala kwileta kufuneka zibhalwe ngendlela enjalo indlela njengoko entice kwaye inzala, sizathu a umnqweno ukuqhubeka unxibelelwano. Ukuba, xa ufunda umyalezo, uyancuma – impumelelo yeyona phantse kwenzeka. Ezinjalo phrases njengoko ‘Molo, yintoni ufuna ukwenza oko.
Kwaye ‘Molo, njani ngabo kuwe
Kufuneka ngoko nangoko lisuswe arsenal. Ubukhulu ukuze babe eletha yi monosyllabic impendulo, ukusuka apho, kuya kuba nzima kakhulu ukuphuhlisa umdla kwaye lively unxibelelwano. Umyalezo kufuneka consist iziphakamiso eziliqela. Ukuba guy sele iingxaki isijamani, kubalulekile kukunceda kakhulu ubuncinane lokuqala ixesha khangela ngenyameko yonke into, ngoko ke, ukuba kukho akukho iimpazamo. Girls asingabo kuphela laughing, kodwa kanjalo annoying, kwaye repellent. Ukuqonda oko kungcono ukubhala, kubalulekile kukunceda kakhulu ukuba bafunde nzulu iphepha esikhethiweyo omnye, ukufunda inkangeleko yayo kwaye statuses. Rhoqo, banako zibalisa kakhulu malunga izimvo, moods kwaye zimvo lomgaqo-kubekho inkqubela. Ukuba iphepha lemibuzo malunga uluhlu oyithandayo imiboniso, uyakwazi ukubhala into efana nale: ‘Molo, Nasty. Kwi-ukukhangela unxibelelwano, ndaya kulo ndawo kwaye sifumaneke kuwe. Mna ngenene uthando kokuya kwi-cinema, ndifuna ukumema ukuba enjalo kwaye enjalo wefilim, kwaye ngoko uyakwazi, basele abanye okumnandi iti kwi-rock. Umbhalo, kunjalo, ndiya vary kuxhomekeke kubekho inkqubela ke imisetyenzana yokuzonwabisa. Bekuya kuba mnandi emva phezulu amazwi enu kunye iifoto ngoko ke ukuba ibali ikhangeleka believable. Ngoko ke kubekho inkqubela iya kuya iphepha kwaye bona a uqinisekile guy, ekubeni fun kunye nabahlobo kwaye enjoying ubomi. Akuvumelekanga uncommon yabantu abatsha ukuba baguqukele psychologist kunye umbuzo: ‘ndiza koyika ukufumana acquainted ne-girls, ndenze ntoni. Ukuba ngokwemvelo esi sipho ayikho, ngoko ke kuya kufuneka constantly shiya yakho intuthuzelo eselunxwemeni. Ngomhla wokuqala, cotton iinyawo, ukwanda sweating kwaye stuttering kuya kwenza guy uzalise numbness, kodwa ixesha uyakwazi ukufunda ukulawula ezi neenkqubo hayi panic. Ukoyisa nayiphi na ka-owakhe fears kwaye ubuthathaka yi inyathelo ukuba inkululeko kwaye mna-ukukholosa. Ukuqonda njani ukufunda ukufumana acquainted nge-girls, qala eyona kunye ngokwakho. Yonke imihla yoqeqesho kunye unxibelelwano kunye ezahluka-girls ingaba indlela impumelelo. Ukuba abe bolder kwi-unxibelelwano kunye opposite sex, ufuna ukufumana motivational ulungelelaniso. Akuyomfuneko ukuba flirt nge-wonke abantu abaqhelekileyo kwaye unfamiliar young elonyuliweyo, uyakwazi nje kuba eyobuhlobo incoko. Ezinjalo unxibelelwano kanjalo uya kunika isibindi kwaye kokuthenjwa zabo abilities. Ukuba kukho practically akukho ulwazi njani ukufunda guys nge-girls, ungasebenzisa tactics ezisebenzayo emamele. Kuyimfuneko ukuba buza ngakumbi loo mibuzo, apho kubekho inkqubela iya kuba pleased ukuphendula
← Amapolisa Kufuna Umntu kuba Usebenzisa iselula babhale phantsi Phezulu kubekho inkqubela ke Skirt ngomhla Ekujoliswe kuwo Store
Mexico Lwezentlalo - Dating App Umhla Incoko kuba Mexicans ye-Android - APK Ukhuphele →